सडक निर्माणमा बेथिति, काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद थप्या थपै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सडक निर्माणमा बेथिति, काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद थप्या थपै
पुष १८, २०७४ 723 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
देशभर दर्जनौं सडक निर्माणाधीन छन् । तर, ती कहिल्यै पनि तोकिएको समय र लागतमा पूरा हुँदैनन् । यसको कारण सरकार तथा कार्यान्वयनकर्ता निकाय जिम्मेवार नहुनु र ठेकेदारको उचित अनुगमन नै हो ।
समयमै काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कानून भए पनि सरकार तथा सरोकारवाला निकायले यसमा उति ध्यान दिँदैनन् । ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उसको म्याद थपिरहने परिपाटी सामान्य जस्तै भएको छ ।
देशभरका सडक निर्माणमा दोहोरिने समस्या पेप्सीचोक–खहरे खण्डमा पनि देखिएको छ । गत असोजमै सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाई गर्दै आएको छ ।
वर्षौं हुँदासम्म सडकको पचास प्रतिशत काम पनि पूरा भएको छैन । काम गर्ने भन्दै सडकमा गिट्टी बालुवा, ढुङ्गा थुपार्दा सर्वसाधारणले आवत–जावतमा सास्ती खेप्दै आएका छन् । यसले सडक दुर्घटना पनि बढेको स्थानीय बताउँछन् ।
समयमा काम नहुँदा धुलोको कारण ठूलो सास्ती बेर्होनु परेको काठमाडौं महानगरपालिका–३२ की बबिला पराजुलीले बताइन । ‘काम सुरु भएको वर्षैं बित्यो तर ठेकेदारले बेला बखत मात्र काम गरेकोजस्तो मात्र गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन लगाएर काम गरेको भयो उहिल्यै सकिन्थ्यो ।’
काम पूरा नभए पनि काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालय–१ ले आगामी फागुनसम्म ठेकेदारको म्याद थपेको छ । अझै कामले गति लिन सकेको छैन् । स्थानीय र ३२ नम्बर वडा कार्यालयले थप ढल विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेपछि निर्माणमा समस्या भएको डिभिजनका सूचना अधिकारी सुशीलराज भण्डारीले बताए ।
‘११ मिटर सडक आगामी फागुन पहिलो साताभित्र पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई सचेत गराइएको छ तर वडाले ढल विस्तार गर्ने हो भने अझै एक वर्ष लाग्छ ।’
करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु भएको सडक सात मिटरबाट बढाएर हाल १४ मिटर पुर्याइएको छ । स्थानीयले भने तत्काल सडक पिच नहुने हो भने काम बन्द गर्न माग गरेका छन् ।